နိုဝင်ဘာလမွေးဖွားမှုအရောင်။ Topaz & citrine ။ အသစ် update ကို 2021
1 ct ထက်နည်း
1 မှ 2.99 ct မှ
3 မှ 4.99 ct မှ
5 မှ 6.99 ct မှ
7 မှ 9.99 ct မှ
10 မှ 14.99 ct မှ
15 မှ 19.99 ct မှ
20 မှ 49.99 ct မှ
50 ကျော် ct
GEMOLOGY တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဝန်ဆောင်မှု ONLINE
ဥဿဖရား နှင့် citrine နို ၀ င်ဘာအတွက်ကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာများကိုရှေးဟောင်းနှင့်ခေတ်သစ်နိုဝင်ဘာအုတ်မြစ်အရောင်များအရသိရသည်။ နို ၀ င်ဘာလက် ၀ တ်ရတနာကွင်းများ၊ လက်ကောက်များ၊
မွေးရပ်မြေ | ဇန္နဝါရီလ | ဖေဖေါ်ဝါရီလ | မတ်လ | ဧပြီလ | မေ | ဇွန်လ | ဇူလိုင်လ | သြဂုတ်လ | စက်တင်ဘာလ | အောက်တိုဘာလ | နိုဝင်ဘာ | ဒီဇင်ဘာလ
birthstone ဆိုသည်မှာနိုဝင်ဘာလ၏မွေးဖွားလနှင့်ဆက်စပ်သောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ဥဿဖရား နှင့် citrine.
လူမီနီယမ်နှင့်ဖလိုရင်းရှိ silikat mineral ။ ဥဿဖရား orthorhombic system တွင် crystallizes နှင့်၎င်း၏ crystals များသည် pyramidal နှင့်အခြားမျက်နှာများမှအများအားဖြင့်နိဂုံးချုပ်သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝတွင်အခက်ခဲဆုံးသောသတ္တုဓာတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းခိုင်မာသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာအဖြစ်သာမကကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်အခြားကျောက်မျက်ရတနာများအတွက်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Citrine အဘယ်သူ၏အရောင်သည် ferric အရောအနှောကြောင့်အဝါရောင်ဖျော့မှအညိုရောင်အထိအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသနည်း။ သဘာဝ citrines ရှားပါးသည်။ စီးပွားဖြစ်အများစု citrines အပူ - ကုသ amethysts သို့မဟုတ် smoky လင်းကျောက်ဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝနှင့်ဆန့်ကျင်သော်လည်းသို့သော်အပူကုသ amethyst, crystal အတွက်သေးငယ်တဲ့လိုင်းများပါလိမ့်မယ် citrineတိမ်ထူထပ်သောအသွင်အပြင်။ ဒါဟာဖြတ်အကြားခွဲခြားရန်မဖြစ်နိုင်သလောက် citrine နှင့်အဝါရောင် ဥဿဖရား အမြင်အာရုံ, ဒါပေမယ့်သူတို့ခိုင်မာသောခြားနားသည်။
သဘာဝ ဥဿဖရား စောက်နှင့်အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ကျယ်ပြန့ ဥဿဖရား ရရှိနိုင်အရောင်များကိုသဘာဝသဲလွန်စအညစ်အကြေးသို့မဟုတ် crystal ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ဖြစ်စေကြောင့်ဖြစ်သည်။ မတူကွဲပြားသောအရောင်များကိုကျောက်မျက်လုပ်ငန်းမှပြောင်းလဲမှုများကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥဿဖရား အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အပြာ၊ အနက်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ရှိအရောင်အမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်သည်။
Citrine နိုဝင်ဘာသားဖွားအရောင်ဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ်အနက်ရောင်အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ Citrine အချိန်တိုင်းတွင်အဝါရောင်၊ အစိမ်း - အဝါရောင်၊ အညိုရောင်အဝါရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင် ဟူ၍ အမျိုးမျိုးသောအချိန်တိုင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဥဿဖရားအာဖဂန်နစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျာမနီ၊ နော်ဝေး၊ ပါကစ္စတန်၊ အီတလီ၊ ဆွီဒင်၊ ဂျပန်၊ ဘရာဇီး၊ မက္ကဆီကို၊ သြစတြေးလျ၊ ဘရာဇီးသည်အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည် ဥဿဖရား.
Citrine, nov birthstone, အဝါရောင်လင်းကျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Quartz အသုံးအများဆုံးသောကျောက်သည်။ ၎င်းကိုနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားတွင်ပင်တွေ့နိုင်သည်။ ဘရာဇီးသည်အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် citrine.
Birthstone လက်ဝတ်ရတနာများကိုလုပ်သည် ဥဿဖရား နှင့် citrine။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုဝင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသောလက်ဝတ်ရတနာကွင်းများ၊ လက်ကောက်များ၊ နားကပ်များ၊
ကောင်းတယ် ဥဿဖရား နှင့် citrine ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ထဲမှာရောင်းရန်
ဥဿဖရား နို ၀ င်ဘာလအတွက်အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ၄ နှင့် ၁၉ နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပသောကျောက်ဖြစ်သည်။ ဥဿဖရား ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုသင်္ကေတဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်စိတ်နေစိတ်ထားကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုဆိုကြသည်
စစ်သားများ သူတို့ရဲ့အလှအပနှင့်တောက်ပမှုအတွက်တန်ဖိုးထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတောက်ပတဲ့နွေးထွေးတဲ့နေနဲ့ဘဝရဲ့တကယ့်ကိုသတိရစေတယ်။ သူတို့၏တောက်ပသောအဝါရောင်အရောင်နှင့်တောက်ပသောကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောစိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပျော်ရွှင်စေသည်။
Scorpio နှင့် Sagittarius ကျောက်တုံးများသည်အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သောကျောက်တုံးဖြစ်သည်။
သငျသညျ Scorpio နှင့် Sagittarius များမှာသမျှ။ ဥဿဖရား နှင့် citrine နိုဝင်ဘာ 1 ကနေ 30 ရက်ဖို့ကျောက်ဖြစ်ကြ၏။
နေ့ ဗေဒင်အတတ်ပညာ Birthstone
အောက်တိုဘာလ 1 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ2Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ3Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ4Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ5Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ6Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ7Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 8 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ9Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 10 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 11 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 12 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 13 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 14 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 15 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 16 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 17 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 18 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 19 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 20 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 21 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 22 Scorpio ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 23 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 24 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 25 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 26 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 27 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 28 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 29 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
အောက်တိုဘာလ 30 Sagittarius ဥဿဖရား နှင့် citrine
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောက်မျက်ဆိုင်၌ရောင်းရန်သဘာဝနို ၀ င်ဘာဖွားကျောက်
ယူအက်စ် - အမေရိကန် (အမေရိကန်) ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
AED - အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု dirham (د.إ)
AFN: အာဖဂန်နစ်စတန် (؋)
အားလုံး: လျဘေးနီးယနျး lek (L)
AMD ၏: Armenian အဘိဓါန် DRAM (AMD ၏)
ANG - နယ်သာလန်အန်တီလန် (Ant)
AOA: အင်ဂိုလာ kwanza (Kz)
ARS - အာဂျင်တီးနားပီဆို (ဒေါ်လာ)
AUD: သြစတြေးလျဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
AWG: Aruban florin (AFL) ။
AZN: Azerbaijani အဘိဓါန် manat (AZN)
Bam: ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားပြောင်းအမှတ်အသား (KM)
BBD: ဘာဘာဒီယန်းဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
BDT: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာကာ (৳)
BGN - ဘူဂေးရီးယား Lev (လ။ )
BHD: ဘာရိန်းဒင်း (.د.ب)
BIF: Burundian ဖရန့် (Fr)
BND: ဘရူနိုင်းဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
Bob: ဘိုလီးဗီးယား boliviano (BS) ။
BRL: ဘရာဇီးအစစ်အမှန် (R $)
BSD - ဗဟားမားဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
BTN: ဘူတန် ngultrum (နု) ။
BWP: ဘော့ဆွာနာ pula (P),
BYN: ဘီလာရုရူဘယ် (Br)
BZD: ဘေလီဇ်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
CAD: ကနေဒါဒေါ်လာ (ကို C $)
CDF: ကွန်ဂိုဖရန့် (Fr)
CHF - ဆွစ်ဖရန် (CHF)
CLP: ချီလီပီဆို ($)
CNY: တရုတ်ယွမ် (¥)
COP: ကိုလံဘီယာပီဆို ($)
စီအာစီ - ကော့စတာရီကန်ကိုလိုနီ (₡)
CUC: ကျူးဘားဘာသာပြောင်း Peso ($)
CUP: ကျူးဘားပီဆို (ဒေါ်လာ)
CVE: ကိပ်ဗာဒီယန် escudo ($)
CZK - ချက်ခရိုနာ (Kč)
DJF: Djiboutian ဖရန့် (Fr)
DKK: ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ (DKK)
DOP: ဒိုမီနီကန်ပီဆို (RD $)
DZD: အယ်လ်ဂျီးရီးယား Dinar (د.ج)
EGP: အီဂျစ်ပေါင် (EGP)
ERN: အီရီထရီးယား nakfa (Nfk)
ETB: အဲသယောပိ birr (Br)
ယူရို - ယူရို (ယူရို)
FJD: ဖီဂျီဒေါ်လာ ($)
FKP: ဖော့ကလန်ကျွန်းစုပေါင် (£)
GBP: ပေါင်စတာလင် (ပေါင်)
GEL: ဂျော်ဂျီယာလာရီ (₾)
GGP: ဂါဇီးပေါင် (£)
GHS: ဂါနာစီဒီ (₵)
GIP: ဂျီဘရောလ်ပေါင် (£)
GMD: Gambian dalasi (ဃ)
GNF: ဂီနီဖရန့် (Fr)
GTQ: ဂွာတီမာလာ quetzal (မေး)
GYD: ဂွိုင်ယန်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
ဟောင်ကောင် - ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
HNL: ဟွန်ဒူးရပ်စ် lempira (L)
HRK:-Croatian Kuna အဘိဓါန် (KN)
HTG: အီသခွားသီး (G)
HUF: ဟနျဂရေီဖောင့် (Ft)
IDR: အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ (RP)
ILS - အစ္စရေးငွေအအသစ် (₪)
IMP: Manx ပေါင် (£)
INR: အိန္ဒိယရူပီး (₹)
အိုင်ကျူဒစ် - အီရတ်ဒင်နာ (ع.د)
IRR: အီရန်လူမျိုး (﷼)
ISK - အိုက်စလန်ကရွန်နာ (kr ။ )
JEP: ဂျာစီပေါင် (£)
JMD: ဂျမေကာဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
JOD: ဂျော်ဒန်ဒါနင် (د.ا)
JPY: ဂျပန်ယန်း (¥)
KES: ကင်ညာရှီလင် (KSh)
KGS: ခရစ္စတီရန်сом (сом)
KHR: ကမ္ဘောဒီးယား riel (៛)
KMF: Comorian ဖရန့် (Fr)
KPW - မြောက်ကိုရီးယားအနိုင်ရ (₩)
KRW - တောင်ကိုရီးယားအနိုင်ရ (₩)
KWD: ကူဝိတ်ဒိုင်နန် (د.ك)
KYD - ကေမန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
KZT: ခါဇက်စတန်တန်ကြေး (₸)
LAK: လာအိုကီ (₭)
LBP: လက်ဘနွန်ပေါင် (ل.ل)
LKR - သီရိလင်္ကာရူပီး (රු)
LRD: လိုက်ဘေးရီးယားဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
LSL: လီဆိုသို loti (L)
LYD: လစ်ဗျားဒါနာ (ل.د)
MAD - မော်ရိုကိုနိုင်ငံဒါဟမ် (د.م. )
MDL: မော်လ်ဒိုဗာ leu (MDL)
MGA: အာလာဂါစီ ariary (အာရ)
MKD: မက်ဒီဒိုးနီးယား (ден)
ကျပ်: ဗမာကျပ် (ကျပ်)
MNT: မွန်ဂိုတိုဂို (₮)
ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်: Macanese အဘိဓါန် pataca (P),
MUR: Mauritian ရူပီး (₨)
MVR: မာလဒီးယန်း rufiyaa (.ރ)
MWK: မာလာဝီ kwacha (MK)
MXN: မက္ကဆီကန်ပီဆို ($)
MYR - မလေးရှားရင်းဂစ် (RM)
MZN: မိုဇမ်ဘစ် metical (MT)
NAD - နမီးဘီးယားဒေါ်လာ (N $)
NGN: နိုင်ဂျီးရီးယား naira (₦)
NIO - နီကာရာဂွာကော်ဒိုဘာ (C $)
NOK: နော်ဝေ krone (kr)
NPR - နီပေါရူပီး (₨)
NZD: နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
OMR: အိုမီနီ rial (ر.ع. )
PAB: ပနားမား balboa (B / ။ )
PGK: ပါပူဝါနယူးဂီနီ kina (K)
PHP: ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို (₱)
PKR - ပါကစ္စတန်ရူပီး (₨)
PLN - ပိုလန်złoty (zł)
QAR: ကာတာ riyal (ر.ق)
RON: ရိုမေးနီးယား leu (Lei)
RSD: ဆားဘီးယားဒိုင်နာ (рсд)
RUB: ရုရှားရူဘယ် (₽)
RWF: ရဝမ်ဒါဖရန့် (Fr)
SAR: ဆော်ဒီ riyal (ر.س)
SBD - ဆော်လမွန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
SCR - စဲချယ်လူးရူပီး (₨)
SDG: ဆူဒန်ပေါင် (س.س. )
SEK: ဆွီဒင်ခရိုနာ (kr)
စင်ကာပူဒေါ်လာ - စင်ကာပူဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
SHP: စိန့်ဟယ်လီနာပေါင် (£)
အရေးပေါ်: ဆိုမာလီရှီလင် (SH)
SRD: ဆူရာနမ်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
SYP - ဆီးရီးယားပေါင် (ل.س)
THB: ထိုင်းဘတ် (฿)
TJS: တာဂျစ်ကစ္စတန် Somoni (ЅМ)
TMT: တာ့ခ်မင်နစ္စတန် manat (ဍ)
TND: တူနီးရှားдинар (د.ت)
TOP: Tonga pa'anga (T $)
ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တူရကီ lira (₺)
TTD: ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
TWD - ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာသစ် (NT $)
TZS: တန်ဇန်းနီးယားရှီလင် (SH)
ယူနိုက်တက် - ယူကရိန်းဟဗန်းနီယား
UGX: ယူဂန်ဒါရှီလင် (UGX)
ယူဂျူး - ဥရုဂွေးနိုင်ငံ peso ($)
UZS: ဥဇဘက်ကစ္စမန်း (UZS)
VEF: ဗင်နီဇွဲလားbolívar (Bs F)
VND: ဗီယက်နမ်đồng (₫)
VUV: ဗာနူအာ vatu (VT)
WST: ဆာမိုနာတာလီ (T)
XAF: ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် (CFA)
XCD - အရှေ့ရစ်ဘီယံဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ)
XOF: အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် (CFA)
XPF: CFP ဖရန့် (Fr)
YER: ယီမင်ပြိုင်ပွဲ (﷼)
ZAR - တောင်အာဖရိက Rand (R)
ZMW: ဇမျဘီယာ kwacha (ZK)
GEMIC Co. , Ltd / GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်း Co. , Ltd ©မူပိုင် 2014-2021, Gem.Agency